२३ पुसपछि काठमाडौंका लागि एयर एसिया उडान रोकिन सक्ने ! – BRTNepal
२३ पुसपछि काठमाडौंका लागि एयर एसिया उडान रोकिन सक्ने !
बिआरटीनेपाल २०७४ पुष २० गते १९:२८ मा प्रकाशित
तारन्तरको ताकेतापछि लामाको कम्पनीले केही दिनअघि १८ लाखको चेक पर्यटन बोर्डमा बुझाएको थियो । तर, उक्त चेक बाउन्स भएको सीईओ जोशीले बताए । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व यसको नेपाली एजेन्ट कम्पनीको हो । तर, एयर एसिया एक्सका एजेन्ट हरिमान लामाले गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार आरालो लागेका कारण सरकारी बक्यौता रहन गएको जनाइएको छ ।यो खबर आजको कान्तिपुरमा सुरज कुँवरले लेखेका छन्।